သတင်း - အပြန်အလှန်ထိတွေ့မှုအကန့်သည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို မည်သို့သဘောပေါက်သနည်း။
EIBOARD သည် အရည်အသွေးမြင့် all-in-one သင်ကြားရေးစက်၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် ထုတ်လုပ်မှုအပေါ် အာရုံစိုက်သည်။ယနေ့၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သော အပြန်အလှန်ထိတွေ့မှု panel သည် ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ပုံကို လေ့လာကြည့်ကြပါစို့။
A. စာသင်ခန်းတွင် ကြိုးတပ်ထားသော ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုလိုင်းတစ်ခု တပ်ဆင်ထားကြောင်း သေချာစေကာမူ သင်ဝယ်ယူထားသော သင်ကြားရေးစက်သည် ကွန်ရက်ကေဘယ်အင်တာဖေ့စ်ထည့်သွင်းခြင်းကို ပံ့ပိုးပေးပါသည်။
B. ကွန်ရက်ချိတ်ဆက်မှုဖြင့် ကွန်ရက်ကြိုးကို အသိဉာဏ်သင်ကြားရေးပေါင်းစပ်စက်၏ ကွန်ရက်ပေါက်သို့ တိုက်ရိုက်ထည့်သွင်းပါ။
C. အင်တာနက်ဝင်ရောက်စမ်းသပ်မှုအတွက် သင်ကြားရေးစက်၏ဘရောက်ဆာကိုဖွင့်ပါ၊ ကွန်ရက်ကိုပုံမှန်အတိုင်းချိတ်ဆက်ပါ၊ ကွန်ရက်အောင်မြင်ပါသည်။
A. ပထမဦးစွာ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော သင်ကြားရေးစက်၏ built-in ဆက်တင်လုပ်ဆောင်ချက်ကို ရှာပြီး ဆက်တင်သို့ ဝင်ရောက်ရန် နှိပ်ပါ။
B. စနစ်ဘားသည် ဆက်တင်၏အင်တာဖေ့စ်ကိုရှာပါ၊ WLAN ခလုတ်ကိုရှာဖွေပြီး ကြိုးမဲ့ကွန်ရက်၏ဆက်တင်ကိုထည့်သွင်းရန် နှိပ်ပါ။
ဂ။ အသိဉာဏ်ရှိသော သင်ကြားရေးစက်အနီးတစ်ဝိုက်ရှိ Wifi အချက်ပြမှုများကို တွေ့ရှိမည်ဖြစ်သည်။
D. ချိတ်ဆက်ရန် လိုအပ်သော wifi ကို ရွေးပြီး ချိတ်ဆက်ရန် စကားဝှက်ကို ရိုက်ထည့်ပါ။
E. စကားဝှက်မှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုပါ၊ “Join” သို့မဟုတ် “Connect” ကိုနှိပ်ပါ၊ wifi ချိတ်ဆက်မှုအောင်မြင်ရန်စောင့်ဆိုင်းပါ၊ ဉာဏ်ရည်ထက်မြက်သောသင်ကြားမှုအားလုံးတွင် စက်သည် ပုံမှန်အင်တာနက်ဝင်ရောက်မှုလုပ်ဆောင်ချက်ကို သိရှိနားလည်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသော ထိတွေ့ panel သည် အနီအောက်ရောင်ခြည် ထိတွေ့ထိန်းချုပ်မှုနည်းပညာ၊ မာလ်တီမီဒီယာကွန်ရက်ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ၊ အသိဉာဏ်ရှိသော ရုံးသင်ကြားရေးဆော့ဖ်ဝဲလ်၊ အဓိပ္ပါယ်မြင့်သော LCD panel display နည်းပညာတို့ကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။
ပရိုဂျက်တာ၊ အီလက်ထရွန်းနစ်နေ့သင်တန်း၊ ကွန်ပျူတာ၊ တီဗီနှင့် ထိခြင်းလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပေါင်းစပ်ထားသောကြောင့် ခေတ်မီဘက်စုံသုံး သင်ထောက်ကူပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အထီးကျန်ခြင်း၏ ရိုးရာပြကွက်ကို ပြည့်စုံသော လူသား-ကွန်ပြူတာ အပြန်အလှန်အကျိုးပြုသည့်ကိရိယာအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့် ထုတ်ကုန်မှတစ်ဆင့် လျင်မြန်သောအရေးအသား၊ ပန်းချီ၊ မှတ်ချက်များကို ရရှိနိုင်ပါသည်။ မာလ်တီမီဒီယာ ဖျော်ဖြေရေး နှင့် ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ချက်။ စက်ကို ဖွင့်လိုက်ရုံဖြင့် အံ့သြဖွယ်ကောင်းသော စာသင်ခန်း သင်ကြားမှုကို အလွယ်တကူ လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိတွင်၊ EIBOARD အပြန်အလှန်ထိတွေ့မှု panel ၏ သမားရိုးကျ မော်ဒယ်များတွင် 55/65/75/85 လက်မ ကဲ့သို့သော သတ်မှတ်ချက်များစွာ ပါ၀င်သည်၊ dual-system ပံ့ပိုးမှုကို ပံ့ပိုးပေးပြီး အွန်လိုင်း သင်ကြားရေး အရင်းအမြစ်များ မျှဝေခြင်းကို ပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်စေပါသည်။